केसीसी एक्जिबिट २०१९ आजबाट सुरु – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, १० साउन, २०७६ । कान्तिपुर सिटी कलेज (केसीसी) ले केसीसी एक्जिबिट २०१९ को आयोजना गरेको छ । शुक्रबार र शनिबार आयोजना हुने सो शैक्षिक मेलाको उद्घाटन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले गर्ने जनाइएको छ ।
सम्मेलन कलेजकै प्राङ्गणमा हुने भएको छ । यस सम्मेलनको मूल नारा ‘निपुण विचार, दीगो उपाय’ रहेको छ । यस कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्ना नयाँ–नयाँ प्रोजेक्टहरू प्रदर्शन गर्ने सम्मेलन संयोजक सरोज पाण्डेले बताए ।
कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स र सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीका २६ भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ । चारवटा फुड स्टल, गेम स्टल, साङ्गीतिक कार्यक्रम र ‘दीगोपनका लागि प्रविधि’ बारे सम्मेलन आयोजना गरिएको संयोजक पाण्डेले बताए । यो मेलामा २० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
प्रदर्शनीका केही प्रोजेक्टहरूमा क्युआर कोडबाट रष्टुराँको अर्डर व्यवस्थापन, दर्ताचलानी, रोबोट, होम अटोमेसन, क्वाडकप्टर, कोटेश्वर ट्राफिक व्यवस्थापन, आकाशे पानी सङ्कलन, स्मार्ट सिटी नमूना, पुनर्निर्माणका लागि नेपाली घरको नमूनालगायत पनि रहेको कलेजका प्रमुख प्रशासक राजीव तिमल्सिनाले जानकारी दिए । त्यस्तै, कार्यक्रममा चर्चित गायक प्रमोद खरेल, डान्सर बिनु शाक्य, लोकगायिका निशा जि एमलगायतको प्रस्तुति पनि रहनेछ ।
मेला बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म आयोजना हुने कार्यक्रम संयोजक कुशल निरौलाले जानकारी दिए । ‘दीगोपनका लागि प्रविधि’ विषयक सो सम्मेलनमा महावीर पुनले उद्योग र संरचनाबारे आफ्नो प्रस्तुती दिने निरौलाले जानकारी दिए । यसैगरी डा. दीपक विक्रम थापा क्षेत्रीले प्रकोपबारे, उज्ज्वल उपाध्यायले जलवायु परिवर्तनबारे, वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दीलिपप्रताप खाँडले स्मार्ट सिटीबारे प्रस्तुति दिने पनि उनले जनाए । जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. डीके लोबियालले कि–नोट भाषण गर्ने पनि जनाइएको छ ।
सन् २००० देखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कान्तिपुर सिटी कलेज (केसीसी) सूचना प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ विषयमा अग्रणी कलेज हो ।
प्रकाशित मिति: 2019-07-26 2019-07-26 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged कान्तिपुर सिटी कलेज केसीसी एक्जिबिट
Tags: कान्तिपुर सिटी कलेज, केसीसी एक्जिबिट